ကားကနေစတစ်ကာဖယ်ရှားပစ်ရန်ဘယ်လိုနေသလဲ? | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
သိပ်အများကြီး drivers တွေကိုဘာမှသင်္ကေတနိုငျကွောငျးသင့်ကားစတစ်ကာများမှလျှက်ရှိကြောင်းနေကြသည်။ တစ်ခါတစ်ရံတံဆိပ်များထုတ်လုပ်သူများထံမှတိုက်ရိုက်ထောက်ပံ့နေကြတယ်, ဒါပေမယ့်မည်သည့်အမှု၌, သင်အချိန်တစ်ခုသာအချို့သောကာလများကဲ့သို့အရာတစ်ခုခုကိုကြိုက်လိမ့်မယ်။
တစ်ချိန်ချိန်သင်ကနှောင့်အယှက်ကိုသာတံဆိပ်, မကြိုက်ဘူးနှင့်သင်ကဖယ်ရှားပစ်ရချင်သောသဘောပေါက်လာပါတယ်။ သို့သော်သူမအလွန်အကြမ်းခံ paste လုပ်ထားတဲ့နှင့်ဝေးရွှေ့ချင်ပါဘူး, သင်သဘာဝကျကျသင့်ကားပေါ်တွင်ဆေးသုတ်ကိုလုယူချင်ကြပါဘူး။ ဤအမှု၌အဘယ်သို့ပြုသနည်း
ဒါကြောင့်မည်သည့်တံဆိပ်များမှသင်၏ကားကိုသန့်ရှင်းရေးအလို့ငှာ, သင်ပထမဦးဆုံးအသငျသညျအနာဂတျတှငျလိုအပျလတံ့သောအရာကိုပြင်ဆင်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်။ အဓိကအား, ဒီရေငွေ့နှင့်သန့်ရှင်းသောအဝတ်သို့မဟုတ်သုတ်ပဝါအဖြစ်မျက်နှာပြင် polishing ဘို့နည်းလမ်း။ သင်တို့သည်လည်းစက္ကူသို့မဟုတ်သမားရိုးကျဓါးသင်တုန်းဖြတ်တောက်ဘို့ပူလေကြောင်း၏ function ကိုဖြစ်သည့်တစ်ဦး hairdryer, ပလတ်စတစ်ကဒ်နှင့်တစ်ဦးဓါးလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျထိုလုပ်ငန်းစဉ်ကနေအာရုံခံခြင်းမရှိဘဲ, မည်သည့်တံဆိပ်ကိုဖယ်ရှားနိုင်အောင်, သင်ခဲ့အားလုံးရရှိနိုင်ကြောင်းသေချာအောင်လုပ်ပါ။
စတစ်ကာများ၏ဖယ်ရှားရေး၏အဓိကလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဆက်လက်မလုပ်ဆောင်မီ, သငျသညျအလုပျမှမျက်နှာပြင်ပြင်ဆင်ထားရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, သင်ကပတ်ပတ်လည်တံဆိပ်ကိုယ်တိုင်နှင့်အာကာသလုံးဝသန့်ရှင်းသောသူသေချာအောင်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ် - တဲ့ damp အထည်နှင့်အတူအားလုံးမြေမှုန့်နှင့်အမှိုက်ကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါ။ ထိုအခါလေမှုတ်စက်ချိတ်ဆက်ပူလေကြောင်း၏စီးဆင်းမှုကို adjust - သင်လေတကယ်ပူဖြစ်လာခဲ့သည်သေချာအောင်သောအခါ, တံဆိပ်မှဆံပင်လေမှုတ်စက်ဖြင့်ကိုင်ထားပါ။ တိုက်ရိုက်တံဆိပ်ကအမှီအဖြစ်သင့်ကားရဲ့ဆေးသုတ်ဖို့မနေပါနဲ့ - မျက်နှာပြင်ကနေစင်တီမီတာ၏စုံတွဲ၏အကွာအဝေးမှာစောင့်ရှောက်လော့။ တစ်ခုလုံးကိုတံဆိပ်အခြောက်ရန်ကဘယ်လို, အနားမှအာရုံစိုက်, ဒါပေမဲ့သူတို့သင်သည်ထိုသူတို့နှင့်အတူစတင်ရန်လိုအပ်မည်မဖယ်ရှားခြင်းဖြစ်စဉ်အတိုင်း, အလွန်အဆုံးမှဆင်းရ။
သငျသညျခြောက်သွေ့စတစ်ကာများ hairdryer ပြီးဆုံးပါပြီအခါ, သငျသညျပလပ်စတစ်ကဒ်နှင့်ကိုယ်ကိုလက်နက် ပြု. သုံးစွဲခြင်းနှင့်အနားကနေတံဆိပ်အဝတ်တန်ဆာကိုချွတ်ရန်စတင်ရန်လိုအပ် - ပူလေကြောင်းကုသမှုပြီးနောက်သူမအများကြီးပိုလွယ်ထွက်သွားနှင့်ပိုမြန်ပါလိမ့်မယ်။ သင်ကပျက်စီးစေနိုင်သောကြောင့်သို့သော်မည်သည့်အမှု၌, ထိုဆေးသုတ်အတွက်သင်တုန်းဓါးသို့မဟုတ်ဓါးကိုအသုံးမပြုပါဘူး။ ယင်းစတစ်ကာစက်၏ကိုယ်ပေါ်တွင်မဟုတ်ခဲ့, နှင့်ပြတင်းပေါက်တစ်ဦးမှာပါလျှင်ထိုကိရိယာများ, ထိုအမှု၌အသုံးပြုကြသည်။ သင်ဖန်ခြစ်ရာများနှင့်အဘယ်သူမျှမစလေိုကွောငျးနိုငျသောကွောငျ့သို့သော်ပင်ဤကိစ္စတွင်အတွက်, အစွန်းရောက်သတိနဲ့ရှေ့ဆက်။ ဒါကြောင့်ပေါက်ကွဲပါလိမ့်မယ်ဆိုပါကအံ့အားသင့်ဖြစ်ပါဘူး, အလွန်သာယာသောမဟုတ်သော်လည်းကသာကိုသဘာဝင် - တစ်ခုလုံးကိုစတစ်ကာကားကိုမှမကွာပါလိမ့်မယ်အထိဤထုံးစံ၌ဆက်လက်ဆောင်ရွက်။ လူတိုင်းတဦးတည်းရွေ့လျားမှုအတွက်တံဆိပ်ကိုဖယ်ရှားချင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ဒီမဖြစ်နိုင်ပါ, ဒါကြောင့်သင်ကြိုးစားရန်ရှိသည်။
ယင်းစတစ်ကာမရှိတော့စက်၏ကိုယ်ပေါ်တွင်သို့မဟုတ်ဖန်ခွက်ပေါ်ကျန်ကြွင်းသောအခါ, သငျသညျသူမတော်ရှိရာအရပ် clean up လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဖန်ခွက်အဘို့အဖန်သန့်စင်အသုံးပြုခြင်း၏အမှု၌, သင်ခန္ဓာကိုယ်ကနေစတစ်ကာကိုဖယ်ရှားမယ်ဆိုရင် - မျက်နှာပြင် polishing များအတွက်ပြင်ဆင်ထား tool ကိုသုံးပါ။ ဒါကြောင့်နှင့်အတူ, သငျသညျပုံအဘယ်သူမျှမကဤအထူးသဖြင့်အရပ်ရှေ့မှာတစ်ချိန်ကစတစ်ကာခဲ့ကြောင်းသံသယနိုင်ကြောင်း, ဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုအောင်မြင်ရန်နိုင်ပါတယ်။ သငျသညျအမှုပေါ်တွင်သို့မဟုတ်ကားများ၏ဖန်အပေါ်တစ်ခုခုကပ်မတိုင်မီကောင်းပြီ, ယခုသင်စက်ဖွင့်သန့်ရှင်းရေး၏ဖြစ်စဉ်မှတဆင့်သွားပြီဖြစ်ကြောင်း, လာမည့်အချိန်ကိုသင်စဉ်းစားပါ။
တံဆိပ် Remove အလွန်ခက်ခဲသည်, ဒါကြောင့်သင်ပြီးတော့သူတို့ကိုယ်သူတို့ဖယ်ရှားလိုဘာမှမသုံးစွဲဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဤနည်းလမ်းကိုမျှမျှတတရိုးရှင်းပြီးလွယ်ကူတဲ့ဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှသင့်ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့လွယ်လွယ်ကူကူလုပျနိုငျကပြောပါတယ် - အနည်းငယ်ချွေးနှင့်သင့်အဖိုးတန်အချိန်ဖြုန်းဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ်။ ယခုမူကား, သင်တို့သည်အသက်တာ၌အခြားအလွန်အရေးကြီးသောသင်ခန်းစာသင်ယူကြသည်။
63 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,222 စက္ကန့်ကျော် Generate ။